Mgbasa ozi. Amaghị aha
Site na Lazarillo de Tormes anyị ahụghị akwụkwọ amaghị ama nwere nnukwu mmasị karịa nke a. Maka na agbanyere okwu ahụ ka ọ dị na ọnọdụ ụwa nke nwere anyị niile na tie piiiiii (ọ bụrụ akwa ma ọ bụ akwa).
Site na ọrịa na -efe efe na ọkwa niile, ụbọchị anọ gara aga, ndị na -eme ngagharị iwe ga -awakpo White House, jiri ọkụ gbaa ya gburugburu wee kpalite agha nke agha (ka ọ na -erule n'oge ahụ Trump echebelarị na bonka ya n'ihu iji nweta ohere nke igwe mmadụ dị njikere maka ihe ọ bụla site na akara dị ike dịka ọnwụ George "Big" Floyd).
Ka ọ dị ugbu a, na mwakpo ịntanetị yiri ya, Anonyeko mebiri ihe niile n'ụzọ ya iji katọọ oke iwe e mere nwa okorobịa ojii ahụ. Site na ụda iyi egwu ha na ibipụta ozi nzuzo, ndị nọ na nkpuchi ahụ rụtụrụ aka na nsogbu ọhụrụ nwere nsonaazụ na -atụghị anya ya.
Mana ọ bụ ya Ndị iro Trump Ha anaghị apụ apụ, ọ dabara nke ọma na ọ dị mgbe emechara ntuli aka nke White House. N'ime, enwere isi ọgbaghara dị n'ihu ihu populist nke onye ndu agwọ agwọ na ụmụ amaala juputara na ịkpọasị na -ewere n'ihu ọgba aghara juru ebe niile.
Ihe osise a na -ahụtụbeghị mbụ nke ihe na -eme n'ime ọchịchị Donald Trump site n'aka onye isi na -amaghị aha White House, onye okwu ịdọ aka na ntị mbụ ya banyere onye isi ala mara jijiji Washington na ụwa niile.
A BỤ M akụkụ nke iguzogide n'ime ọchịchị nchịkwa. M na -arụrụ onye isi ala ọrụ, mana dịka ndị ọrụ ibe m, ekwere m nkwa igbochi akụkụ nke atụmatụ ya na mkpali ya kacha njọ.
Na Septemba 5, 2018 New York Times bipụtara akwụkwọ echiche na -agbawa agbawa na -ekwe nkwa amaghị onye dere ya. A kọwara dị ka "onye isi nọ n'ọchịchị Trump," onye dere ya kọwara na ọ bụ onye na-ahụ anya n'ọgbaaghara dị na White House, enweghị ntụkwasị obi nke nchịkwa ahụ, yana otu ndị mmadụ si arụ ọrụ iji chịkwaa mkpali na-enweghị isi nke Donald Trump.
Site na ntuli aka 2020 na -abịa, Anonymous alaghachila na nsogbu ahụ. N'ime akwụkwọ a, onye edemede na -aga n'ihu n'ihu site n'inye nghọta na -enweghị atụ banyere Onye isi ala Trump na ndekọ egwu ya; akwụkwọ dị mkpa maka ntuli aka na-abịanụ nke ga-eju ma maa ndị Democrats na ndị Republican aka, na-akpali ha ịtụle ka esi ekpe ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị America ikpe ma lebara anya nke ọma n'ihe ga-esi na ntuli aka Donald Trump ọzọ dịka onye isi ala.
Ị nwere ike zụta akwụkwọ a "Ịdọ aka na ntị", ebe a:
Tags Akwụkwọ ndị dị ugbu a, Akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị